Arday u Dhalatay Somaliland, oo Shaqo Laga Siiyey Ethiopia – Rasaasa News
Arday u Dhalatay Somaliland, oo Shaqo Laga Siiyey Ethiopia
Oct 3, 2011 51 Arday oo Somaliland ah oo Shaqo Laga Siiyey Ethiopia
Hargesia, Oct 3, 2011 [ras] – Arday ay tiradoodu kor u dhaafayso konton , oo u dhalatay maamul gableedka waqooyi galbeed Somaliya [somaliland], ayaa dhawaan shaqo ka bilaabi doona magaalooyinka Addis Ababa, Dire Dawa iyo Jijiga xarunta maamulka dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Ardaydan ayaa dhamaantooda haysta shahaadada kowaad ee Jaamacada manhajka Ethiopia, ayaa lagu shaqaaleeyey heerka waxbarashadooda, iyaga oo ka hawlgali doona xafiisyada kala duwan ee dawlada iyo kuwa gaarka ah.
Ardaydan ayaa dhamaantood waxay haystaan sharciga Ethiopia iyo waliba dhalashada Somaliland.
Dhawaan ayey ahayd kolkii ay Jaamacada Admas University College ee dalka Ethiopia ay ka soo Qalin Jabiyeen 289 Arday, oo ka soo jeeda waqooyiga dalka Somaliya [somaliland] September 16, 2011.
Waxayna ahayd qaybtii 3aad ee ka qalin jabisay Jaamacada Admas Univesity college, tan iyo intii ay ka furatay Jaamacadu laan magaalada Hargaysa ee maamul gabaleedka waqooyi galbeed Somaliya [somaliland] sanadkii 2006.
Admas unversity college waxaa ay ka mid yahay Iskuulada faraha badan ee gaarka loo leeyahay ee ka jira dalka Ethiopia. Waxaana Adamas College la aas aasay sanadkii 1998, waxayna laamo ku leedahayd magaalooyin dhawra ah oo ku yaal dalka Ethiopia.
Dalka Somaliya oo dawlad la,aan ah mudo 21 sano ah, ayaa u kala googo,ay gabalo iskood isu maamula, oo ku tiirsan dalalka dariska la ah dalka Somaliya.
Dawlad la,aanta ka jirta dalka Somaliya ayaa waxay keentay sharci daro baahsan oo meel walba gashay oo saamaysay nolosha dadweynaha.
Dalka Ethiopia ayaa dhinacyo badan ka caawiya maamul gabaleedyada ka jira dalka Somaliya, sida; amaanka, ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada iyo arimaha bulshada.
Wasaarada waxbarashada ee Ethiopia ayaa si weyn uga hawlgasha maamulka Somaliland iyada oo ka caawisa waxbarashada dugsiga hoose ilaa iyo heer Jaamacadeed.
Manhajka waxbarashada ee maamulka Somalida Ethiopia iyo maamulka Somaliland ayaa isku mid ah, ardayda ka soo baxdana waxay shaqooyin ka raadsadaan maamulka Somalida iyo dalwaynaha Ethiopia.
Sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad uga dhex muuqanayey shaqooyinka magaalada Addis Ababa dad Somali ah oo ka soo jeeda maamulka Somaliland. Laakiin ma jiraan shaqaale Somali ah oo ka yimaada dhinaca degaanka Somalida, waxaa jira sharci xadidaya shaqaalaha degaanada in ay shaqo ka helaan degaan kale.
Maamulka Somalida Ethiopia ayaan wax faragalina ku samayn karin dadka Somalida ah ee si madax banaan looga shaqaaleeyo meelo kale oo dalka Ethiopia ah. Waa arin cusub oo u baahan in hoos loo dayo in Ethiopia ay kala garan waydo dadka u dhashay degaanka Somalida Ethiopia iyo dadweynaha Jamhuuriyada Somaliya.